Kulan Su’aalo lagu waydiinayay guddiga doorashooyinka oo maanta ka dhacay Jowhar +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Kulan Su’aalo lagu waydiinayay guddiga doorashooyinka oo maanta ka dhacay Jowhar +(SAWIRRO)
February 24, 2020 February 24, 2020 HalQaran Staff	0 Comments Kulan Su’aalo lagu waydiinayay guddiga doorashooyinka
Jowhar (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hirshabelle maanta lagu qabtay kulan su’aalo lagu weydiinayay Masuuliyiinta Guddiga Doorashada Qaranka, oo maalintii labaad ku sugan magaaladaasi.
Kulanka ayaa ahaa mid ay Labada Gole ee Hirshabelle su’aalo ku weydiinayeen xubnaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, waxaana ka qaybgalay Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Xubnaha Gudigga Doorashooyinka Qaranka oo Axadii gaaray Magaalada Jowhar ayaa waxaa horkaceysay, Marwo Khadiija Cosoble Cali, waxayna kulanka kaga jawaabtay su’aalihii lagu weydiiyay.
Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle oo kulanka ka hadlay ayaa Guddiga Doorashooyinka Qaranka u sheegay in HIrshabelle, ay diyaar u tahay qabsoomida doorasho qof iyo cod ah.
Dadka Soomaaliyeed ayaa ku kala qaybsamay aragtida sheegaysa in Somaliya ay 2020/2021 ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, inkastoo taasi ay dadka badankii u arkaan mid aanay xilligan suurtagal ahayn, sababo la xiriira amniga oo aan cago badan ku taagnayn.
← Madaxweyne Laftagareen oo Xilalkii ka xayuubiyay wasiirro, kuwa cusub-na magacaabay
Maxaa ka ogtahay diyaarad siday saraakiil iyo Ciidanba ay ka degtay magaalada Dhuusamareeb? →
March 18, 2020 HalQaran Staff 0
Xubno caan ah oo ka mid noqday golaha wasiirrada cusub ee Galmudug (Akhri Magacyada)
April 24, 2020 HalQaran Staff 0
November 9, 2019 November 9, 2019 Duuliye 0